On 4/3/2020 at 12:37 AM, cadnaan1 said:
Thanks, He is awaken, I would love to meet him and coffee.
He is brave man to speak the truth
Su'aalahaagu dhumuc ma leh umana eka su'aalo xog-ogaal iyo aqoonyahan midnaba.
Nimankan iyo gabdhahaan muqdisho taga oo waqooyiga kasoo jeeda, wixii dawladaan ka horeeyay ma muuqan karin sababtoo ah waxaan jirin nadaam iyo madax banaani shaqo oo ay ka dhex muuqan karaan.
Iminka xalka soomaaliya waxaa laga rabaa koonfurta iyo waqooyiga oo isku duuban
Maalinba maalinta ka dambaysana way soo buskoonayaan.
Balse berigii hore waxay soomaaliya u muuqatay in koonfurta kaliya xal keento snm'na ay aqoonsi beena shacabka ku maaweeliso.
Arimahoo dhan markii lasoo koobo waxay ahaayeen tacab khasaar.
Midan aad leedahay cafis bay waydiistaan hogaamiyaha snm markay muqdisho kasoo noqdaan way ku saxan yihiin
Meeshaad ku dhalatay waa inaad ku nasataa markaad waynaato ama soo daasho.
Cafisku sadexda habrood, dadkii ay dhaleen yuu ka dhaxeeyaa, wax wayn ma'ahan.
Xilka qaranku ma'ahan shaqo qof iska leeyahay, waa shaqo mar walba qabyo ah, oo qof sii wada u baahan, laga bilaabo madax-weyne ilaa agaasime waaxeed.
Warkaanu malaha tix-raac iyo shaabaddii dawladda ee waa ku tiri ku teen.
Hadii ay dhacdo in shaqada laga badelo, labo wajiba way u furan-tahay, wax mushkilada ma leh aragtidayda
Inuu snm ku noqdo oo sidii caadada ahayd towbad keeno asagoo ula jeeda inuu reerkiisa iyo gobolkiisa ku noolaado.
Inuu masuul xil laga qaaday noqdo oo mucaaradka dhinac kaga biiro, asagoo muqdisho jooga CV iyo khibradna helay, labadaas wajiba way u furan yihiin.
Haday hargaysa, burco iyo gabilay ka yimaadaan, la oran maayo meeshii loo dhiibo yaan laga qaadin si aysan dib ugu noqon snm, gobolada waqooyi ceel lagu dhaco ma'ahan wali soomaaliya kama go'in.
Tan in badan aan ka maqalno snm oo ay leeyihiin dadka xamar jooga nama matalaan waa runtood.
Ma jiro senatooro iyo xildhibaano matala goboladii ay kasoo jeedeen ama shacabku karti ugu codeeyeen waa guud ahaan wadankoo dhan.
Nadaamkaanu waa 4.5 loogu tala galay inay qabiilada muraayad u noqdaan, shaqadooduna aysan intaas dhaafin.
Reer hebel intee senator iyo xildhibaan bay leeyihiin waa wax iska ramsi ah oo hargaysa iyo meel kastaba looga xisaabtamo.
Hadaba maxaa la gudboon snm?
Aragtidayda koonfutu waxay dooratay inay madixii soomaaliya noqoto, waxaana isugu yimid qabiilo badan oo soomaaliyeed.
Snm waa inay kartidooda daacadnimadooda, nasiibkooda, iyo codkarnimadooda, dalkooda wax ugu qabtaan, hankoodana gaarsiiyaan ilaa madaxweynaha soomaaliya.
Marnaba yaysan dhihin anagu xaad baan leenahay oo dadka kale uma ekin, ama marti wax la siiyay ha naloo ekaysiiyo.
Meesha shaqa aad u adag yaa taala wakhtigii tiyaartarka la aadi lahaa lama gaarin wali.
Hadii kale waxay la mid noqonayaan wax tabar daran oo aan misaan lahayn, ama shimbirtii dibigga geesihiisa saarnayd maalintii oo dhan asagoon dareemin, oo casarkii ku tiri waan iska caraabayaaye nabad galyo.